Huwandu Hwevari Kufa neChirwere cheMalaria Hwonzi Hwadzikira
Boka rekudziwirirwa kwechirwere chemalaria, reMalaria Control and Command Center, iro riri pasi pebazi rezvehutano, rati vanhu vanosvika zana nemakumi matatu vakashaya nechirerwe ichi kubvira kutanga kwegore rino, kunyangwe hazvo mwedzi wapfuura, uri iyo nguva ino tekeshera chirwere ichi.
Programme Manager veMalaria Control and Command Center Doctor Joseph Mberikunashe vati vari kufadzwa nezvirongwa zvavari kuita mukudzivirira chirwere ichi sezvo huwandu hweavo vari kurasikirwa nehupenyu hwadzikira gore rino.
Doctor Mberikunashe vati vari kufadzwa nekufamba kuri kuita zvirongwa zvekudzivirira chirwere chemalaria, asi vatiwo vanokurudzira avo vanenge vachi fungidzira kuti vabatwa nechirwere ichi kuti vaende kuzvipatara zvehurumende, sezvo vanorwara nechirwere ichi vachirapwa pachena.
Doctor Mberikunashe vati sangano ravo rakakwanisa kupa mamosquito net anosvika mamiriyoni maviri kune vanhu vari munzvimbo dzine humhutu, danho ravati raita kuti chirwere ichi chidzikire munyika.
Vatiwo bazi ravo rakakwanisa kufirita mishonga ino uraya humhutu munzvimbo makumi mana neshanu dzino simbonesta nechirwere chemalaria, izvo zvabatsira kudzikisira huwandu hweavo vari kubatwa nechirwere ichi nevari kushaya kubva kuchirwere ichi.
Hurukuro naDoctor Joseph Mberikunashe